Warbixin naxdin leh oo laga soo saarey Ciidamada Soomaaliya - Worldnews.com
MUQDISHO - Majaladda "Foreign Policy" oo fadhigeedu yahay Mareykanka, islamarkaana ka faaloota arrimaha siyaadda, dhaqaalaha iyo afkaarta ayaa warbixin naxdin leh ka qortay Ciidamada dalka Soomaaliya.
Warbixintan oo cinwaan looga dhigay
"Soomaaliya waa dal aan ciidan lahayn"
ayaa lagu sheegay in amaanka dalkan ku yaalla
Taliska xoogga dalka Soomaaliya oo ka jawaabay maqaalkii Foreign Policy
MUQDISH - Taliyaha hoggaanka siyaasada iyo wacigalinta ciidanka xoogga dalka G/sare CabdiXamiid Sheekh Cali Xaydar oo ka jawaabayay maqaal lagu daabacay Majalada Foreign...
Baraha bulshada iyo doodaha ugu weyn ee hadal haynta dadku u badnayd ayaa ah hadal uu kornayl ka tirsan askarta Uganda ee qaybta ka ah AMISOM u sheegay wargayska Foreign...
MUQDISHO, Soomaaliya - Agaasiimaha Hay'adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya [NISA], Xuseen Cismaan Xuseen ayaa shaqo joojin ku sameeyay ku xigeenadiisa, xilli...
Gareowe Online 2018-07-16
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha ciidamadda xooga, Daahir Aadan Cilmi [Indha-qarshe] ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay tuutaha milatariga dalka, kaasi oo ay ku...
Gareowe Online 2018-11-15
​Al Shabaab oo weerar ku qaaday Fariisinka AMISOM ee Biya Cadde
BIYA CADDE, Somalia – Malleeshiyaad katirsan kooxda Al Shabaab, ayaa weerar culus ku qaadey Saldhigga Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM ku leeyihiin Deegaanka Biya Cadde,...
Askar kasoo goosatay Jubbaland oo isku dhiibay Al shabaab
JILIB, Somalia - Afar askari oo uu ku jiro Saraal sare, ayaa isku dhiibay Kooxda al shabaab, kadib markii ay kasoo goosteen ciidamada maamulka Jubbaland. Korneyl Yaasiin...
Gareowe Online 2017-07-20
JILIB, Somalia - Afar askari oo uu ku jiro Saraal sare, ayaa isku dhiibay Kooxda al shabaab, kadib markii ay kasoo goosteen ciidamada maamulka Jubbaland. Korneyl Yaasiin Faarax (Fiilo), iyo saddex askari oo kamid ahaa ilaaladiisa gaarka ah ayaa lagu soo bandhigay degmada Jilib, ee gobolka Jubbada Dhexe, iyagoo ku lebisan Dareeska Militariga, kuna hubaysan qoriga AK-47. War...
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahin dheerad ah ayaa kasoo baxaysa qarax culus oo maanta duhurkii ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, ee caasimadda Soomaaliya. Qaraxa oo ahaa miino ayaa haleeshay Gaari nooca Cabdi-Billaha loo yaqaano, oo ay la socdeen Askar katirsan guutada Apha Group ee Hay'add Nabad Sugida Soomaaliya, waxaana halkaasi ku dhintay saddex Askari iyo shacab ah oo...
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirka dowladda Turkiga ufadhiya dalka Soomaaliya ee Olgan Bekar ayaa wuxuu tilmaamay in hadii ay AMISOM isaga baxdo Soomaaliya ay sii kordhayaa culeysyadda ka jira amaanka guud ahaan ee dalka. Wuxuu tilmaamay Danjiraha in Howlgalka Nabad Illaalinta Soomaaliya ee AMISOM ay kaalin muuqata ku leeyihiin dadaaladda dib loogu soo celinayo amaanka dalka, ayna...
Fahad Yaasin oo diyaarad dhexdeeda ugu gacan-qaadey diblomaasi UN
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahad Yaasiin, taliye ku xigeenka cusub ee hay'adda Nabad Sugida dowladda Federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa gudaha diyaaradda Qatar Airways ugu gacan qaadey diblomaasi katirsan Qaramada Midoobey 21-kii bishan September. Qof kamid ah rakaabkii diyaaradda oo ka timid dhanka Doha islamarkaana ku degtay Garoonka Jommo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaaa...
Ciidan hubka la galay Gollaha Shacabka oo xabsi la dhigay [DAAWO]
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Generaal Cabdiweli Jaamac "Gorod", ayaa shaaciyay in xabsiga la dhigay Koox Askar ah oo hub la galay shalay xarunta Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka. Askartan oo tira ahaan lagu qiyaasay 45 ayaa la socday Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari, oo shalay la wareegay xarunta xilli Xildhibaanno iska...